Champion Raceway | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE! Champion Raceway | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE!
Haddii uu jiro isboorti kasta oo si fiican u la xiriira warshadaha khamaarka, waxaa xaqiiqo ah waa horyaalka tartanka faras. Tani waxay waayo-aragnimo waddo orod cajiib ah loogu raaxaysan karaa in ciyaarta Afyare ah markii ugu horeysay. Thanks to ah Champion Raceway, ciyaarta Afyare saddex ambadeen ku salaysan theme ee tartanka faras. In this casino mobile sii wixii aad ku guulaysato Afyare, Waxaa jira saddex duntu iyo shan paylines. Ciyaarta ayaa waxaa lagu wadaa in hortegi lahaa ee racecourse la dhawaaqa boggiisa badnaa. Waxa kale oo jira waddo orod derby ah shan fardo in lagaaga caawiyo in aad ku guuleysato gunooyinka qaar ka mid ah. xadka sharadka ayaa la filayaa inta u dhaxaysa £ 0.25 iyo £ 100 wareejin kasta.
About sameeysa ee Champion Raceway
isboorti Tani casino mobile sii wixii aad ku guulaysato ciyaarta waxaa la sameeyey by IGT, mid ka mid ah horumarinta casino online ugu fiican adduunka oo dhan. Waxay ku abuureen kulan badan oo caynkaas cusub oo loogu talagalay dadka isticmaala internetka iyo kuwa la ciyaari karaa qalab kala duwan oo ay ku jiraan telefoonnada gacanta iyo kiniiniyada.
Waxaa jira shan saldhig calaamado in this casino mobile sii wixii aad ku guulaysato ciyaar. Waxay yihiin Calaamooyinka miraha sida qeybtii jarjaran qaraha, canab buluug, tufaax guduud, liin iyo liinta. Astaanta qaraha wuxuu ku siinayaa heshay sare ee ciyaarta of 100 jeer aad saamiga. dalka orange 75 qadaadiicda, tufaax bixin 30, canab la meelmarin ah 15 iyo 10 waayo, liin ah. Intaa waxaa dheer, waxaa hadhay shan marsami midabo kala duwan in u muuqdaan sida Isgoysmo on calaamadaha midhaha. marsami waxay door ka ee furayay muuqaalada bonus.
Wild Astaanta: Astaanta dhufanayasaa la '3x' ku xusan waxay ku waa muujinta duurjoogta ah ee booska this. Wild daboolayaa ee dhammaan calaamadaha ee ciyaarta. Saddex ka mid ah calaamad this markii u muuqataa guud ahaan payline a, aad bixisaa guul saamiga of weyn a 10,000 qadaadiicda.
Bonus waddo orod: Waxaa jira shan fardo on waddo orod oo ka sarreeya Afyare. Sidani oo shan muuqaalada bonus kala duwan ee this casino mobile sii wixii aad ku guulaysato ciyaarta. Hadba kii faraska ugu horeysay gaadho, ku siinayaa ay gunno u dhiganta. Marka rashinkana midab gaar ah u muuqataa inta lagu guda jiro wareejin ah, faraska u dhiganta guuro mid ka mid ah in saddex tallaabo. tirada tallaabooyinkaygu inta ay ku xiran tahay tirada marsami midab kala soo baxa duntu ku. At line dhamaysto, aad ku guuleysan karto 5 ama 10 dhigeeysa free, ama yar yar, Ghanna dhexdhexaad ah ama weyn.
Summary:Tani waa kaliya casino mobile sii wixii aad ku guulaysato kulan la feature waddo orod ah. Iyada oo feature kala duwan bonus iyo naqshadeynta kartoon cajiib ah, tani waa Afyare waa inaad hubaal ma seegi.